I-DC Gear Motor iyathengiswa, i-torque ephezulu ilungiselelwe i-DC motor
Isithuthi esincane seGDC Gear
DC gear gear 100 rpm
Izimoto zegiya le-DC 24v
Izimoto zegiya le-DC ezinekhodi
I-Worm DC gear motor
Ngingayitholaphi imikhiqizo yesethenjwa?
Kuthiwani ngekhwalithi yakho ye-DC Gear Motors?
Ungayikhetha Kanjani i-DC Gear Motor efanele?
Ungaba kanjani umenzeli wakho?
Udinga Ukubonisana ngebhizinisi lakho?
I-Sogears yokukhiqiza nobunjiniyela ibisebenza kusukela 1993, iklama futhi ikhiqiza i-torque ende ende ye-DC ehlala isikhathi eside. Ukusebenza Okuphezulu Komunye Umkhakha. Ikhwalithi Eqinisekisiwe.
Sinokuhlangenwe nakho kobuchwepheshe obuthuthukile bangaphandle, imishini esezingeni eliphakeme, iqembu labaphathi abangochwepheshe futhi siqedela inqubo, kepha ngokuhambisana ngqo ne-iso9001 / ts16949 ilawula ukukhiqizwa, ngaleyo ndlela iqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo ngamunye owenziwe.
Ngingaluthola kuphi ulwazi ezinkampanini ezizimele?
Ngenkathi "intengo efanelekile, isikhathi sokulethwa okusheshayo" ukusungula idumela elihle phakathi kwamakhasimende, inkampani inabasebenzisi abaningi basekhaya kanye nabakhiqizi ukusungula ubudlelwano obuqinile phakathi kokuhlinzekwa nokudingwayo. kanti i-90% yemikhiqizo yenkampani ithunyelwa emazweni ahlanganisiwe, i-germany, i-japan, i-italy, iMalaysia, i-australia, empumalanga ephakathi nakwamanye amazwe nezifunda. ukunconywa ngabasebenzisi. Ngakho-ke, uma ufuna ukubambisana nathi, singakwazi ukuhlela amakhasimende ethu ezweni lakho ukukuthumelela amasampula enkomba yakho noma singakuthumela ngqo.
Likhulu kangakanani iqembu leprojekthi?
Izinhlelo zethu ezisezingeni eliphakeme zekhwalithi ziyisiqinisekiso sokusebenza okungaphumeleli.INkampani yethu enamathela kunhloso yokuphatha yekhwalithi yokuqala, eyaziwa ngokuthi i-motor motor ephezulu kakhulu eyakhiwe. Banokusebenza okuthule, idizayini ephansi yokudlidliza, nobukhulu obucacile, basebenza ngokungaphezu kwalokho obekulindelwe. Lezi zinto zithuthukiswa kuphela ngezinketho zazo eziningi zokufaka.
Ungayikhetha Kanjani I-Right Gear Motor?
I-1. Yazi izidingo zakho zohlelo lokusebenza.
Isinyathelo sokuqala ekukhetheni imoto yegiya le-dc ukubukeza izidingo zakho zohlelo lokusebenza. Lokhu kufaka phakathi kepha akunqunyelwe kokulandelayo:
Izidingo ezijwayelekile: Usayizi we-envelope, ukuma okwenyuka, uhlobo olukhuphukayo nosayizi, imithwalo eseqile nangaseceleni, nohlobo lokuthambisa.
Umthombo wamandla wokufaka: Voltage, frequency (Hz), maximum yamanje (Amps) nohlobo lokulawula, uma kusebenza.
Ukucaciswa kwe-Gearmotor: Ubukhulu, isisindo, izinga lomsindo olifunayo, iminyaka yokuphila kanye nezinga lokulungisa.
Ukusebenza kwe-Gearmotor: ijubane, i-torque, umjikelezo wemfanelo, amandla wehhashi, ukuqala nokusebenzisa i-torque (umthwalo ophelele).
Indawo yokusebenza: I-DC gear motor ene-encoder, Ukushisa kanye nokushisa okukhona, kanye nokuvikela i-ingress (IP).
I-2. Khetha i-motor gear gear efanele.
Okulandelayo, sebenzisa uhlu lwakho lwezidingo zohlelo lokusebenza bese uziqhathanisa nokucaciswa kwemoto kwezinhlobo ezahlukahlukene onentshisekelo kuzo ezifana ne-universal, brushless noma i-gearmotor yamagnetic engapheli. Ngoba isicelo ngasinye sinezimpawu nezimpawu zaso ezihlukile, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi isiphi isici njengokuqina kwehhashi, ukuqala i-torque noma ukusebenza kahle kubaluleke kakhulu esicelweni sakho. Ngalesi sigaba, unganquma ukuthi ukufanisa ibhokisi lamagiya nemoto ngokuhlukile kuzohambisana nezidingo zakho.
I-3. Yazi ijubane kanye ne-torque izidingo zomthwalo ozoqhutshwa.
Ukuqinisekisa ukuthi i-gearmotor yakho ikalwe kahle ngohlelo lwakho lokusebenza oluhloselwe, kubalulekile ukwazi isivinini sakho sokukhipha, isibonelo i-DC gear motor 100 rpm, ukuqala nokusebenzisa i-torque. Ukukhetha i-gearmotor efanelekile kuyindaba yokufanisa isivinini sokuphuma (i-RPM) ne-torque kuzidingo zohlelo lwakho lokusebenza. Ijubane lokukhipha kunqunywa yizidingo zomshini wakho futhi kufanele kwaziwe. Lokho kushiya i-torque yokuqala futhi egijimayo ukuba inqunywe. Khumbula, uma ukhetha i-gearmotor eyenzelwe ngaphambili, umenzi usekwenzile konke ukuphakamisa okusindayo ukuqinisekisa ukuthi imoto ne-gearbox kuzosebenza ngaphandle komgwaqo.
Lapho usubale ukubala kwakho kokuqala nokusebenzisa i-torque, sebenzisa ijika lomsebenzi womenzi wethoshi, isivinini kanye nokusebenza kahle ukuthola imoto ehambelana nezidingo zakho. Bese ubuyekeza ukulinganiselwa kokuklama okubandakanya i-torque egijimayo (ngokugcwele-umthwalo), isivinini sokufaka, amandla wegiya le-gearbox, izici ezishisayo nemijikelezo yomsebenzi.
Lapho usukhethile i-gearmotor, kubalulekile ukuthi ugijime izivivinyo eziningana ukuqinisekisa ukuthi imoto isebenza kahle endaweni ejwayelekile yokusebenza. Uma imoto ishisa ngokungenangqondo, inomsindo omkhulu, noma ibonakala icindezelekile, yiphinde inqubo yokukhetha imoto noma thintana nomenzi.
Ukuthatha isikhathi sokukhula kahle i-gearmotor yakho kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi kuzohlala iminyaka futhi kusebenze kahle kakhulu.
Ngingayitholaphi i-The Economist?
Sicela uthumele yonke imininingwane yakho ku-imeyili yethu [i-imeyili ivikelwe] futhi izodluliselwa kubaphathi bethu. Bazobheka futhi banikeze impendulo yakho, bese-ke, kungadingeka ukuthi sihlangane ukuze sikhulume ngokuqhubekayo.
Xhumana nathi namuhla bese uthole owokuqala